PU xumbo Cadaadiska Cadaadiska Soosaarayaasha - Shiinaha PU xumbo Cadaadiska Cadaadiska Warshadaha & Alaab-qeybiyeyaasha
Size Giant jilicsan pu cadaadis ball weyn oo liin toy tuujin toy la kartoo
Magaca badeecada: pu kubad walaac liin baaxad weyn leh
Lambarka sheyga: DCPU-F11
Cabir: 10cm * 10cm * 8cm
Midab: jaalle; casaan
caag puppy digaag kubad anti walbahaarka ka hortagga
Magaca badeecada: pu xumbo digaagga ka hortagga walbahaarka
Lambarka sheyga: DCPU-A015
Cabir: 9cm * 10cm * 7cm
iibinta kulul ee jumbo kawaii qurux badan oo buluug buluug ah oo kalluun squishy yar kawaii nihales Anti Stress Toy
Magaca badeecada: Nibil yar oo kawaii whales Anti Stress Toy
Lambarka sheyga: DCPU-A004
Cabir: 6cm * 10.5cm * 6.5cm / 8cm * 13.5cm * 8.5cm
Midabka: casaan; buluug
Home Ciyaaraha Cunnooyinka Ciyaaraha Kubadda Cunnooyinka Cunnooyinka Qurxoon PU Slow Rising Jumbo Unicorn Squishy haddiyadaha dhalashada gabdhaha
Magaca badeecada: Jumbo Unicorn Squishy
Lambarka sheyga: DCPU-A007
Cabir: 7.5cm * 10cm * 14cm
Midabka: casaan; cad
Dareen yar ama walaac ah beryahan? Ama waxaa laga yaabaa inaad walbahaar dareento maalin kasta iskuul ama shaqo darteed. Haddii jawaabtaada su'aalahan ay haa tahay, markaa waxaan kuu haynaa xal fudud—kubadaha walaaca!
Maxay Tahay Kubadaha Cadaadiska? Faa'iidooyinka Kubbadda Cadaadiska Sare：
1. Waxay sii deysaa xiisad muruq ah.
2. dareenkaaga weeciso.
3. Waxay kicineysaa neerfahaaga.
4. Waxay xoojisaa diirada iyo foojignaanta.
5. Wuxuu daweeyaa dhaawacyada gacanta qaarkood.
Anti-stress Smiley kubada wajiga
Soo saare raqiis ah Eco Friendly oem caag caruurtu ku ciyaarto oo ka hortag cadaadis kubbada cagta PU
Dadka isticmaalay kubadaha walaaca—oo ay ku jiraan ardayda daraasaddan—waxay inta badan ogaadeen inay si aad ah waxtar ugu leeyihiin xoojinta diiradooda oo ay rabaan inay u sii wataan adeegsiga joogtada ah kadib markay si fudud isku dayaan.
Soo saare raqiis ah Eco Friendly oem caag caruurtu ku ciyaarto oo ka hortag ah cadaadiska Biyaha tababarka kubbadda gacanta qabashada